Uroyi! yakanaka RPG mune yemahara app yevhiki | IPhone nhau
Uroyi! yakanaka RPG mune yemahara app yevhiki
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, Apple inofara kusimudzira chikumbiro icho chinowanzo kubhadharwa mahara, kuchichipa icho se "yemahara app yevhiki." Nenzira iyi tichakwanisa kurodha pasi ichi chishandiso kubva rapfuura China kusvika China chinotevera. Apple inotevera akateedzana ehunyanzvi uye emhando nzira yekutipa iyi yemahara kunyorera, uye chokwadi ndechekuti neUroyi! wapedza heresarudzo huru.
Iyi RPG iri mubhuku-mutambo fomati yave iri sarudzo yevaCupertino vakomana vausingafanire kupotsa, inonakidza nyaya iyo inokuchengetedza iwe kunamatira kuchiratidziro kwemaawa akati wandei. Pinda tinokuudza zvakadzama kuti chii chinonzi Uroyi! Svondo remahara app.
Iyo yekugadzira studio yemazuva makumi masere yakaona yakakodzera kugadzira panguva Uroyi!, mubairo wakakunda RPG, Pakati pevamwe midhiya vakasangana nerumbidzo rweTouch Arcade, Kotaku uye Eurogamer. Ndicho chimwezve chikonzero nei tichifanira kukurudzira uyu mutambo-wekutamba mutambo. Nekudaro, iro rakanyanya kujeka ruzivo nderekuti isu tiri kutarisana nemutambo mumabhuku fomati, chimwe chinhu senge graphic adventure iyo yatinozofambira mberi zvishoma nezvishoma nemhepo iyo chero mutambi weanopera makore makumi masere uye kutanga kwemakumi mapfumbamwe anozoziva nekukurumidza.
Ngano Steve Jackson, mubatsiri-muvambi weLionhead Studios ndiye anoona nezvenyaya iyi, saka haufanire kuipotsa. Mutambo wegemhu unoonga chaizvo sezvawakaona mumuenzaniso vhidhiyo yataida kukusiya pano, kuti ugone kuve nenguva yakanaka. Pachokwadi, Ini ndinokurudzira kurodha pasi kunyangwe usiri kuzoridza nekukasira, kuva naro muchikamu chako "Chakatengwa" cheApp Store hachizokukuvadze., uye pamwe rimwe zuva iwe unoda kuitamba. Yepasirese inoenderana zvese zviri zviviri iPhone uye iPad uye iPod Kubata kubva kuIOS 7.0.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Uroyi! yakanaka RPG mune yemahara app yevhiki
Sticky AI inoshandura yako weti yako kuita zvitambi nekuda kweArtificial Intelligence